Shirkadaha caanaha IDFP (615250-02-7) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Xabbad dufan leh / IDFP (615250-02-7)
Rating: SKU: 615250-02-7. Category: Xabbad dufan leh
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ah ee IDFP (615250-02-7), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
IDFP Calaamadaha aasaasiga ah:
Qaaciddada Molecular: C15H32FO2P
Miisaanka kelli: 294.391
Kaydinta Nabadgelyada: -20 ° C
IDFP (615250-02-7) wareeg ah
Magacyada kiimikada: ISOPROPYL DODECYLFLUOROPHOSPHONATE
Isku mid ahaan:
IDFP (615250-02-7) Isticmaal
IDFP waa xarun isku xiran oo la xiriirta wakiilka neerfaha ee sarin. Sida sarin oo kale, IDFP waa horjoogsade aan laga soo kaban karin dhowr enzymis kala duwan oo caadi ahaan u adeega burburinta neurotransmitters, si kastaba ha noqotee silsiladda dheer ee alkolada ah ee IDFP waxay ka dhigeysaa mid si aad ah u daciif ah sida ka hortagga acetylcholinesterase (AChE), oo leh IC50 oo kaliya 6300nM, halka waa xakameyn xoog leh oo ka kooban laba enzymes monoacylglycerol lipase (MAGL), enzyme-ka koowaad ee mas'uulka ka ah hoos u dhigista endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG), iyo fatty acid amide hydrolase (FAAH), enzyme-ka koowaad ee hoos u dhiga endocannabinoid anandam kale . IC50 ee IDFP waa 0.8nM at MAGL, iyo 3.0nM at FAAH. Xakamaynta labadan enzym waxay keenaysaa heerar si muuqata u kordhay labada anandamide iyo 2-AG ee maskaxda, taasoo keentay kordhinta calaamadaha cannabinoid iyo saamaynta dabeecadaha caadiga ah ee cannabinoid ee daraasaadka xayawaanka, halka awood la'aanta AChE ay ka dhigan tahay in aan la soo saarin astaamo cholinergic ah. [1 ]    In kasta oo qaab dhismeed kiimikaad la mid ah ay u leeyihiin wakiilada neerfaha ee la mamnuucay, silsiladda dheer ee alkyl ee IDFP waxay u keentaa inay ku dhacdo meel ka baxsan qeexida "kiimikada sunta ah" ee ku xusan Heshiiska Hubka Kiimikada,  iyo maadaama aysan sidoo kale soo bandhigin ka hortagga AChE ee xeryahooda organophosphorus ee la xiriira, IDFP kuma xirna isla kantaroolo sharci oo adag.
Waa maxay qiyaasta IDFP
Kaydinta muddada dheer, waxaan ku talineynaa in IDFP la keydiyo sida ku jirta -20 ℃. Waa inay ahaato mid degan ugu yaraan hal sano.
IDFP waxaa loo bixiyaa xal sida methyl acetate. Si aad u beddesho xalka, si fudud uumi gashiga methyl acetate iyadoo la raacayo socodka qulqulka ah ee nitrogenand isla markiiba ku darso xalka doomaha. Kuwa sida etanol, DMSO, iyo dimethyl formamide oo lagu nadiifiyo gaas geel ah ayaa loo isticmaali karaa. Xakamaynta IDFP ee ku jira dareerayaasha kuwan waa qiyaastii 10mg / ml.
Haddii xalalka aqueous stock-ka loo baahan yahay tijaabooyinka bayoolajiga, waxay si fiican ugu diyaargaroobi karaan adoo isticmaalaya qasacadeyaal dabiiciga ah oo ku jira maadada aqueous ama salinein isotonic. Fiiri in qaddarka haraaga ah ee hanti-bixiyuhu uu yahay mid aan muhiim ahayn, maadaama ay dareerayaasha dabiiciga ahi yeelan karaan saameyn nafsi ah oo leh heerarka hooseeya. laguma talin inaad kaydiso xalinta aqueous in ka badan hal maalin.
Sida IDFP u shaqeyso
IDFP waa inhibitor ah karin, waayo, tiro ka mid ah ensaymes kala duwan sida caadiga ah u adeegaan si ay u burburiyaan neurotransmitters, si kastaba ha ahaatee silsiladda alkyl dheer IDFP dhigaysa itdramatically taagta daran sida inhibitor ah acetylcholinesterase (xanuun), halka ay tahay inhibitor a awood laba ensaymes monoacylglycerol lipase ( MAGL), enzyme aasaasiga ah ee mas'uulka ka ah xakameynta endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG), iyo hidde-nadiifinta ambalaan (fatah acid amide hydrolase) (FAAH), enzyming primary kaas oo hoos u dhigta kale anandamide anaendocannabinoid. Qalabka jirheerka ah ee si habsami leh u difaacaya MAGL iyo FAAH oo leh qiimaha IC50 ee 0.8 iyo 3 nM siday u kala horreeyaan. 1 10 mg / kg, IDFP waxay sare u qaadaysaa heerarka maskaxda ee 2-AG iyo AEA in ka badan 10-laab, waxayna hoos u dhigtaa heerarka arachidone acid by 10-laab.
Badeecadani maahan adeegsiga aadanaha ama kuwa caafimaadka xoolaha, digniino badan ayaa weli ku jira baaritaan. Ka fogow taabashada tooska ah ee maqaarka, indhaha, mareenka neefta, raaxo la'aan, wac dhakhtarkaaga isla markiiba.
IDFP (615250-02-7) Kalluun Kareem
Ma IDFP ma leedahay saameyn kasta
Xakamaynta caanaha, oo loo tixgeliyey muhiimadda ay leedahay qiyaasta milixda iyo dheellitirka biyaha iyo xakamaynta dhiigga ee muddada dheer, ayaa lagu kordhiyay anandamide iyo laba ka mid ah istiraatiijiyadaha waaweyn ee metabolizing, cyclooxygenase-2 (COX-2) iyo hidde-dufan amase hidde ah (FAAH) . Faleebo of anandamide (15, 30, iyo 60 nmol · min-1 · kg-1) galay medulla ee kelyaha ee jiirka C57BL / 6J dhiiri diuresis iyo Digo cusbo in a Cox-2- laakiin ma hab Cox-1 ku tiirsan. Si loo go'aamiyo in endocannabinoids endocannabinoids ee xuubka medulla xayeysiin karaan saameyn la mid ah, saameynta ay intramedullary isopropyl dodecyl fluorophosphate (IDFP), taasoo horjoogsatay labada hydrolases endocannabinoid weyn, ayaa la darsay. Daaweynta IDFP waxay kordhay xaddiga kaadi-keenidda iyo sifeynta sodium COX-2- laakiin ma ahan habka COX-1. Lamaandheysi ama IDFP wax saameyn ah u lahayn sifooyinka glomerular. Midkoodna systemic (0.625 mg · kg-1 · 30 min-1 iv) mana intramedullary (15 nmol · min-1 · kg-1 · 30 min-1) pretreatment IDFP hor anandamide intramedullary (nmol 15-30 · min-1 · kg-1) Dhibaatooyinka adag ee la xannibay ee anandamide, oo tilmaamaya in hiddo-galeetada anandamide aysan muhiim ugu ahayn saameynta duriinka. Barnaamijka IDFP ee saamaynta ku leh ayaa saameyn ku yeeshay socodka dhiigga ee kelyaha laakiin wuxuu dhiirrigeliyay socodka dhiigga ee dhiigga. Saameynta IDFP ku saabsan heerka socodka kaadida iyo socodka dhiigga ee medullary waxay ahaayeen kuwo ku tiirsan FAAH iyaga oo muujinaya isticmaalka jiirka jiirka ee FAAH. Falanqaynta uruureen mouse PGE2 kaadida by HPLC-electrospray tusmo ionization spectrometry mass muujisay in daaweyn IDFP hoos PGE2 kaadida xogta waxay la door ah FAAH iyo anandamide qoomiyadda sii marayo metabolite a Cox-2 ku tiirsan si ay sharciyaynta diuresis iyo cusbo Digo ee mousekidney.
Sida loo iibsado budada IDFP (615250-02-7) laga bilaabo AASraw
6-Dehydronandrolone acetate budada (2590-41-2)